အဂွဲရိုးရဲ့ အန်ဖီးလ်အိပ်မက်ဆိုးတွေက ဘယ်တော့မှ အဆုံးသတ်သွားမလဲ
အန်ဖီးလ် ကျိန်စာဆိုးကို ချိုးဖြတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးတဲ့ အဂွဲရိုး Aguero
8 Oct 2018 . 6:09 PM
မန်စီးတီးရဲ့ ဂိုးသွင်းစက် အဂွဲရိုး Aguero ဆိုတာက ကွင်းမရွေး၊ ပြိုင်ဘက်မရွေး ရင်ဆိုင် စိန်ခေါ်ဖို့ အသင့်ရှိနေတတ်တဲ့ ကစားသမားတစ်ဦး။ ဒါပေမဲ့ အန်ဖီးလ်ဆိုတဲ့ အမည်ကို ကြားလိုက်ရင် အဂွဲရိုးတစ်ယောက် တုန်လှုပ်သွားတတ်တယ်။ ကျန်တဲ့ကွင်းတွေမှာ ကျားရဲတစ်ကောင်လို မာန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ဂိုးတွေ တဒိုင်းဒိုင်း သွင်းယူလေ့ရှိတဲ့ အဂွဲရိုး အန်ဖီးလ်ကွင်းမှာဆိုရင် ကြောင်တစ်ကောင်လို ဖြစ်သွားတယ်။ ပိုဆိုးတာက အန်ဖီးလ်ကွင်းမှာ ခြေချခဲ့တဲ့ပွဲတိုင်း အဂွဲရိုး ခေါင်းမော့ရင်ကော့ပြီး ထွက်ခဲ့ရတာက တစ်ကြိမ်မှ မရှိခဲ့ဘူး။ “You’ll Never Walk Alone “ဆိုတဲ့ စာသားအောက်မှာ အဂွဲရိုးရဲ့ ဂိုးဆာလောင်မှုဝိညာဉ်က သေဆုံးသွားခဲ့ရတယ်။
အန်ဖီးလ်ကွင်းကို အဂွဲရိုး ပထမဆုံးခြေချခဲ့တာက ၂၀၀၈၊ နိုဝင်ဘာလ (၄)ရက်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက အက်သလက်တီကိုအသင်းနဲ့အတူ တောက်ပနေတဲ့ ကြယ်ပွင့်သစ်ဂုဏ်ပုဒ် ပိုင်ရှင် အဂွဲရိုး ဦးဆောင်လာတဲ့ အသင်းက အန်ဖီးလ်ကွင်းမှာ သရေတစ်မှတ်ကို ရင်မှာပိုက်ပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့ရတယ်။ ဒါဟာ အဂွဲရိုးရဲ့ အန်ဖီးလ်ကျိန်စာဆိုးအတွက် နိဒါန်းပါပဲ။ အဲဒီကတည်းက အန်ဖီးလ်ဆိုတာက အဂွဲရိုးအတွက် အိပ်မက်ဆိုးတွေ ဖန်တီးရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး အခုအချိန်အထိလည်း ဒီအိပ်မက်ဆိုးထဲက မနိုးထနိုင်သေးပါဘူး။
တနင်္ဂနွေနေ့မှာ အဂွဲရိုးရဲ့ အပြာရောင်တပ်သားတွေ ကြိုးကြာနီတို့ရဲ့ တောင်ပံခတ်သံကြားမှာ တစ်စစီ လွင့်စီခဲ့ပြီး အဂွဲရိုးဆိုရင် ပွဲချိန်ပြည့်တောင် မကစားခဲ့ရဘဲ လူစားလဲခံခဲ့ရတယ်။ အခုဆို အဂွဲရိုးရဲ့ အန်ဖီးလ်ကွင်းမှတ်တမ်း (၁၀)ပွဲမှာ နိုင်ပွဲမရှိ၊ သွင်းဂိုးမရှိ။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် သူ့ ကစားသမားဘ၀မှတ်တမ်းမှာ အန်ဖီးလ်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာမျက်နှာတွေကို အဂွဲရိုး စုတ်ဖြဲပစ်ချင်နေပါလိမ့်မယ်။ အဂွဲရိုးရဲ့ အန်ဖီးလ်အိပ်မက်ဆိုးတွေက ဘယ်တော့မှ အဆုံးသတ်သွားမလဲဆိုတာတော့ . .
Liverpool 1 Atletico Madrid 1 – Champions League, November 4, 2008
Liverpool2Atletico Madrid 1 – Europa League, April 29, 2010
Liverpool 1 Manchester City 1 – Premier League, November 27, 2011
Liverpool2Manchester City2– League Cup, January 25, 2012
Liverpool3Manchester City2– Premier League, April 13, 2014
Liverpool2Manchester City 1 – Premier League, March 1, 2015
Liverpool3Manchester City0– Premier League, March 2, 2016
Liverpool 1 Manchester City0– Premier League, December 31, 2016
Liverpool4Manchester City3– Premier League, January 14, 2018
Liverpool0Manchester City0– Premier League, October 7, 2018
Photo:Fox Sports,Daily Advent Nigeria,squawka,Getty Images
အနျဖီးလျ ကြိနျစာဆိုးကို ခြိုးဖွတျနိုငျခွငျး မရှိသေးတဲ့ အဂှဲရိုး Aguero
မနျစီးတီးရဲ့ ဂိုးသှငျးစကျ အဂှဲရိုး Aguero ဆိုတာက ကှငျးမရှေး၊ ပွိုငျဘကျမရှေး ရငျဆိုငျ စိနျချေါဖို့ အသငျ့ရှိနတေတျတဲ့ ကစားသမားတဈဦး။ ဒါပမေဲ့ အနျဖီးလျဆိုတဲ့ အမညျကို ကွားလိုကျရငျ အဂှဲရိုးတဈယောကျ တုနျလှုပျသှားတတျတယျ။ ကနျြတဲ့ကှငျးတှမှော ကြားရဲတဈကောငျလို မာနျပွငျးပွငျးနဲ့ ဂိုးတှေ တဒိုငျးဒိုငျး သှငျးယူလရှေိ့တဲ့ အဂှဲရိုး အနျဖီးလျကှငျးမှာဆိုရငျ ကွောငျတဈကောငျလို ဖွဈသှားတယျ။ ပိုဆိုးတာက အနျဖီးလျကှငျးမှာ ခွခေခြဲ့တဲ့ပှဲတိုငျး အဂှဲရိုး ခေါငျးမော့ရငျကော့ပွီး ထှကျခဲ့ရတာက တဈကွိမျမှ မရှိခဲ့ဘူး။ “You’ll Never Walk Alone “ဆိုတဲ့ စာသားအောကျမှာ အဂှဲရိုးရဲ့ ဂိုးဆာလောငျမှုဝိညာဉျက သဆေုံးသှားခဲ့ရတယျ။
အနျဖီးလျကှငျးကို အဂှဲရိုး ပထမဆုံးခွခေခြဲ့တာက ၂၀၀၈၊ နိုဝငျဘာလ (၄)ရကျ။ အဲဒီအခြိနျတုနျးက အကျသလကျတီကိုအသငျးနဲ့အတူ တောကျပနတေဲ့ ကွယျပှငျ့သဈဂုဏျပုဒျ ပိုငျရှငျ အဂှဲရိုး ဦးဆောငျလာတဲ့ အသငျးက အနျဖီးလျကှငျးမှာ သရတေဈမှတျကို ရငျမှာပိုကျပွီး အိမျပွနျခဲ့ရတယျ။ ဒါဟာ အဂှဲရိုးရဲ့ အနျဖီးလျကြိနျစာဆိုးအတှကျ နိဒါနျးပါပဲ။ အဲဒီကတညျးက အနျဖီးလျဆိုတာက အဂှဲရိုးအတှကျ အိပျမကျဆိုးတှေ ဖနျတီးရာ နရောတဈခုဖွဈခဲ့ပွီး အခုအခြိနျအထိလညျး ဒီအိပျမကျဆိုးထဲက မနိုးထနိုငျသေးပါဘူး။
တနင်ျဂနှနေမှေ့ာ အဂှဲရိုးရဲ့ အပွာရောငျတပျသားတှေ ကွိုးကွာနီတို့ရဲ့ တောငျပံခတျသံကွားမှာ တဈစစီ လှငျ့စီခဲ့ပွီး အဂှဲရိုးဆိုရငျ ပှဲခြိနျပွညျ့တောငျ မကစားခဲ့ရဘဲ လူစားလဲခံခဲ့ရတယျ။ အခုဆို အဂှဲရိုးရဲ့ အနျဖီးလျကှငျးမှတျတမျး (၁၀)ပှဲမှာ နိုငျပှဲမရှိ၊ သှငျးဂိုးမရှိ။ ဖွဈနိုငျမယျဆိုရငျ သူ့ ကစားသမားဘဝမှတျတမျးမှာ အနျဖီးလျကှငျးနဲ့ပတျသကျတဲ့ စာမကျြနှာတှကေို အဂှဲရိုး စုတျဖွဲပဈခငျြနပေါလိမျ့မယျ။ အဂှဲရိုးရဲ့ အနျဖီးလျအိပျမကျဆိုးတှကေ ဘယျတော့မှ အဆုံးသတျသှားမလဲဆိုတာတော့ . .